Midowga Musharrixiinta oo ka hadlay Go’aankii Xukuumadda RW Rooble | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Midowga Musharrixiinta oo ka hadlay Go’aankii Xukuumadda RW Rooble
Midowga Musharrixiinta oo ka hadlay Go’aankii Xukuumadda RW Rooble
written by warsan radio 24/01/2022
Xubnaha Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha ayaa soo dhaweeyay tallaabadii Xukuumadda xilgaarsiinta ah ee Ra’iisul Wasaare Rooble ku ansixisay in liiska Argagaxisada laga saaro Ururka ONLF & inay qalad aheyd dhiibistii Cabsi Kariin Muuse Qalbi-dhagax.
Qoraal ay soo saareen Midowga Musharrixiibta ayaa waxaa ay sheegeen in go’aankii Xukuumaddii Xasan Cali Kheyre ay aheyd taariikh madow oo mugdi ah, isla markaana xad gudub ku aheyd xaquuqda muwaadinka, Sumcadda iyo dowladnimada Somalia.
” Goluhu wuxuu u hambalyeynayaa Raysal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo xukuumadiisa go’aanka geesinimada iyo wadinayadda xambaarsan oo ay qaateen kaas oo saxay khaladaadkii Dowladdu horey gashay ayaa lagu yiri” Qoraalka Midowga Musharrixiinta.
Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa uga digay saraakiisaha ciidan ee garabka ka helaya Madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhamaaday in ay faraha kala baxaan arrimaha siyaasadda. Tabashada reer Hiiraanna ay tahay mid u baahan xal siyaasadeed, ayna aheyn in olole doorasho loo adeegsado.
Midowga Musharrixiinta oo ka hadlay Go’aankii Xukuumadda RW Rooble was last modified: January 24th, 2022 by warsan radio
Weerar khasaare gaystay oo ka dhacay Dalka Jarmalka
Akhriso:-howlgal ka dhan ah Al-Shabaab oo AMISOM ku dhawaaqday in ay bilaabi doonto Sanadka Cusub